Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.1.2 Markasta-on
First, had-on xog ururinta awood cilmi inaad wax ka barato dhacdooyinka aan la fileynin in siyaabo aan suurtowdo hore. Tusaale ahaan, cilmi xiiso waxbarasho ka baayacmushtara dibad Gezi Turkiga xagaagii 2013 caadi diiradda saari doono dhaqanka dibad inta lagu guda jiro dhacdo. Ceren Budak iyo Duncan Watts (2015) ay awoodaan in ay ka badan adigoo isticmaalaya nooca Twitter had iyo jeer-on inaad wax ka barato Twitter-isticmaalaya dibad ka hor, inta lagu guda jiro sameeyo, iyo ka dib markii ay dhacdo. Markaasaa, waxay karin inuu abuuro koox la isbarbar non-qayb-galayaasha (ama ka qaybgalayaasha oo aan tweet ku saabsan dibad) ka hor, inta lagu guda jiro ahaayeen, iyo ka dib dhacdo (Jaantuska 2.1). Wadar ahaan ay guddi ex-post ka mid ah tweets ee 30,000 oo qof in ka badan laba sano. By bi'inta xogta caadi ahaan loo isticmaalo ka dibad la this macluumaad kale, Budak iyo Watts ay awoodaan in ay ka badan bartaan, waxay awoodi karaan in la qiyaaso waxa noocyada kala duwan ee dadka waxay u badantahay in ay ka qayb ka dibad Gezi iyo in la qiyaaso isbedel ee dabeecadaha ahaayeen ka qaybgalayaasha iyo non-qayb-galayaasha, labada ee muddada gaaban (pre-barbar Gezi in inta lagu guda jiro Gezi) iyo muddo-dheer (pre-barbar Gezi to post-Gezi).
Jaantuska 2.1: Design isticmaalo by Budak and Watts (2015) si ay u bartaan baayacmushtara dibad Gezi Turkiga xagaagii 2013. By isticmaalaya nooca Twitter had iyo jeer-on, cilmi abuuray waxa ay u yeedheen guddi ex-post ah in ka mid ah oo ku saabsan 30,000 oo qof in ka badan laba sano. Marka la barbardhigo baadhitaan caadiga ah in diiradda lagu saaray ka qaybgalayaasha intii uu mudaaharaadku socday, guddi hore ee boostada ku darayaa 1) xogta ka-qayb-hor iyo ka dib dhacdada iyo 2) xogta laga non-qayb-galayaasha ka hor, inta lagu guda jiro, oo ka dib markii ay dhacdo. Tani dhismeedka data la xoojiyey karti Budak iyo Watts in la qiyaaso waxa noocyada kala duwan ee dadka waxay u badantahay in ay ka qayb ka dibad Gezi iyo in la qiyaaso isbedel ee dabeecadaha ka qaybgalayaasha iyo non-qayb-galayaasha, labada ee muddada gaaban (is barbar pre-Gezi in inta lagu guda jiro Gezi) iyo muddo-dheer (pre-barbar Gezi to post-Gezi).
Waa run in qaar ka mid ah qiyaasaha, kuwaas oo laga yaabaa ayaa la sameeyey oo aan had iyo jeer-on ilo xog ururinta (tusaale ahaan, qiyaasta mudada dheer ee isbedel habdhaqanka), in kasta oo xogta sida ururinta loogu talagalay 30,000 oo qof ay noqon lahaayeen kuwa aad qaali u ah. Oo, xataa siiyo miisaaniyad aan xad lahayn, anigu ma aan ka fikiri karaa hab kasta oo kale oo muhiimad u ogolaanaya cilmi in ay dib u safri in waqti iyo si toos ah u dhawrtaan oo dhaqanka ka qaybgalayaasha ee la soo dhaafay. kale The dhow noqon doono si ay u ururiyaan wararka eegay dhaqanka, laakiin wararka noqon doono of granularity kooban iyo saxsanaanta su'aal. Shaxda 2.1 siiyaa tusaalayaal kale ee waxbarashada in isticmaal had-on ilo xog inaad wax ka barato dhacdo aan la filayn.
Shaxda 2.1: Studies of dhacdooyinka aan la fileynin had-on isticmaalaya ilo xog weyn.
Had iyo jeer-xogta ilaha
Ku baayacmushtara dhaqdhaqaaqa Gezi ee Turkey Twitter Budak and Watts (2015)
dibad Dallada ee Hong Kong Weibo Zhang (2016)
Toogashada ee booliska ee Magaalada New York Jooji-iyo-Frisk wararka Legewie (2016)
Qofka ku biiro kooxda ISIS Twitter Magdy, Darwish, and Weber (2016)
September 11, 2001 weerar livejournal.com Cohn, Mehl, and Pennebaker (2004)
September 11, 2001 weerar farriimo pager Back, Küfner, and Egloff (2010) , Pury (2011) , Back, Küfner, and Egloff (2011)
Second, had-on xog ururinta awood cilmi in ay soo saaraan cabir-waqtiga dhabta ah, kaas oo noqon kara muhiim ah in goobaha ay siyaasad-dejiyeyaasha doonayaa in aan ma barto oo kaliya ka dhaqanka ee hadda jira, laakiin sidoo kale ka jawaabo, waxa uu. Tusaale ahaan, xogta warbaahinta bulshada waxaa loo isticmaali karaa si uu u hago ka jawaabidda musiibooyinka dabiiciga ah (Castillo 2016) .
Gebogebadii, had-xogta nidaamka awood cilmi inaad wax ka barato dhacdooyinka aan la fileynin oo siiyaan macluumaad-waqtiga dhabta ah in siyaasad-dejiyeyaasha. Anigu ma aan, si kastaba ha ahaatee, waxa uu soo jeedinayaa in had iyo jeer-xogta nidaamka awood cilmi si ay ula socdaan isbedelka ka badan waqti dheer. Saas waxaa ugu wacan nidaamyo badan oo data weyn joogto ah la beddelo-a habka loo yaqaan miyigii (Qaybta 2.3.2.4).